XOG+DAAWO: DF Soomaaliya oo cadaadis badan uga imaanayo Beesha Caalamka, kuna wajahan Arrimaha Kismaayo.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar laga helayo Xaafiisyada Madaxda sare ee dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ay Beesha Caalamku bilowday qorshaha isku duba ridka in ay shirka bisha October ka dhacaya Muqdisho ay kasoo qeybgaliso Madaxda dawlad gobaleedyada ee ay is hayaan dawladda Faderaalka, oo ay ku jiraan maamulada Puntland & Jubbaland.
Dawladda Faderaalka ayaa loo gudbiyey qoraal arrimahan ku wajahan, waxaana la sheegay in aysan waxba Beesha Caalamku u arkeynin kulanka October haddii aan la helin dawlad gobaleedyada oo dhan, si loo qaato go`aamo ku saleysan arrimaha Soomaalida iyo Beesha Caalamka u dhaxeeya.
Wakiilada caalamiga ah, waxay walaac ka muujiyeen hab dhaqanka Madaxda Soomaaliya oo ay sheegeen in aysan mudo labo sanno ah waxba ka qaban arrimaha geedi socodka ammaanka, siyaasadda iyo in wadajir looga gudbo marxaladaha taagan.
Dawlad gobaleedyada ayay u arkaan muhiimad weyn oo ay tahay in talada wax laga siiyo, gaar ahaana marka ay taagan yihiin arrimaha ku wajahan doorashooyinka iyo qorshaha saameynaya guud ahaan Soomaaliya.
Xukuumadda Faderaalka ayaa dhawaan xayiraado kala duwan kusoo rogtay Jubbaland, waxaana talaabadaas ay u arkayeen beesha Caalamka kuwa lagu dhaawacayo arrimaha horey ay u gaareen dhinacyadu oo kuwajahnaa wada shaqeyn iyo faragalinta oo la joojiyo.
Kulankii u dambeeyey oo ay yeeshaan Madaxda Siyaasadda Soomaalida ayaa fashil kusoo dhamaaday bishii May, magaalada Garoowe, waxaana wixii halkaas ka dambeeyey aan jirin wada shaqeyn dhameystiran, waxaana dhinacyada dhexmaray hadalo kulul oo ay is dhaafsadeen iyo xanibaado waa weyn oo socday.
Cadaadiskan cusub ee la saarayo Villa Soomaaliya, haddii ay aqbasho in ay miiska wada xaajoodyada yimaadaan Madaxda Jubbaland iyo Puntland, waxay ka dhigan tahay biseyl siyaasadeed oo la gaaray, haddii ay diidana waxay muujinaysaa in aysan ku faraxsaneyn talaabadaas beesha Caalamku.